Maxaa iska quseeya duufanada Amerika iyo saxaraha Afrika? - BBC News Somali
Maxaa iska quseeya duufanada Amerika iyo saxaraha Afrika?
Iyada oo ay adduunka ka dhacayaan duufaano badan, gaar ahaan ay ku dhufanayaan jasiiradaha badda Caribbean-ka ayaa dabaylaha ka dhaca saxaraha Afrika waxaa la sheegay in ay dabaylahaasi ka hortagi karaan duufaanada ku dhufta jasiiradahaas.
Daadihiyaha barnaamijka cimiladda ee BBC-da Tomasx Schafernaker ayaa sharaxaya, wuxuuna yiri "Dabaylaha ka dhaca saxafaraha Africa ayuu habaaskooda ku bidaa badweynta Atlantic, iyo meelo fogfog oo kale sida badda Caribeanka iyo kaynta Amazon, ciiddaasi ayaa ka hortagi karta in duufaanada ay samaysmaan".
"Sababta ugu weyn ee aan u malaynayno ayaa ah in tirada badan ee ciidda ee hawada ku jirta in ay caburinayso dabaysha duufaanta" ayuu intaas yiri Tomasz oo intaas ku daray in haddii biyaha badda aysan kululayn ay sidoo kale duufaanada aysan samaysmi karin maadaamaa ay ka kacdo cimilada kulul.
Sidaasi oo ay tahay haddane duufaanada asal ahaan waxaa la sheegaa in ay kasoo biloowdaan dhulka saxaraha ah ee Afrika, iyaga oo marka ay gaaraan badda Caribean-ka isu badala duufaan rasmi ah oo weyn, waxayna marka dambe gaartaa illaa Maraykanka.
Duufaanada hadda ku dhufanaya jasiiradaha ayaa la sheegay in ay ugu wacantahay cimiladda hadda jirta.
Duufaano waaweyn ayaa ka dhacaya meelo badan oo adduunka ka mid ah, waxana ay geysteen qasaarooyin xoog leh oo dad iyo hantiba isugu jira, waxaana laga fikirayaa sidii looga gaashaaman lahaa iyo waliba sababaha soo celceliya markasta.